43.9356°N 0.0706°W ﻿ / 43.9356; -0.0706 I Cazaubon dia kaominina ao aminny fivondronani Condom, ao aminny departemantani Gers, ao aminny faritri Midi-Pyrénées, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 32096. I Claude Sainrapt no benny ...
43.6594°N 0.2611°E ﻿ / 43.6594; 0.2611 I Cazaux-dAnglès dia kaominina ao aminny fivondronani Auch, ao aminny departemantani Gers, ao aminny faritri Midi-Pyrénées, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 32097. I Jean Claude Theulé no ...
43.5333°N 0.9667°E ﻿ / 43.5333; 0.9667 I Cazaux-Savès dia kaominina ao aminny fivondronani Auch, ao aminny departemantani Gers, ao aminny faritri Midi-Pyrénées, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 32098. I Jean-Claude Tournan no ...
43.4542°N 0.1744°E ﻿ / 43.4542; 0.1744 I Cazaux-Villecomtal dia kaominina ao aminny fivondronani Mirande, ao aminny departemantani Gers, ao aminny faritri Midi-Pyrénées, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 32099. I Georges Dutilh ...
43.8869°N 0.1625°E ﻿ / 43.8869; 0.1625 I Cazeneuve dia kaominina ao aminny fivondronani Condom, ao aminny departemantani Gers, ao aminny faritri Midi-Pyrénées, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 32100. I Martine Laborde-Noyer no ...
43.3461°N 0.5492°E ﻿ / 43.3461; 0.5492 I Chélan dia kaominina ao aminny fivondronani Mirande, ao aminny departemantani Gers, ao aminny faritri Midi-Pyrénées, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 32103. I Julien Collongues no benny ...
43.4719°N 0.5236°E ﻿ / 43.4719; 0.5236 I Clermont-Pouyguillès dia kaominina ao aminny fivondronani Mirande, ao aminny departemantani Gers, ao aminny faritri Midi-Pyrénées, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 32104. I Vincent Cerè ...
43.6183°N 1.0303°E ﻿ / 43.6183; 1.0303 I Clermont-Savès dia kaominina ao aminny fivondronani Auch, ao aminny departemantani Gers, ao aminny faritri Midi-Pyrénées, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 32105. I Gaetan Longo no benny ...
43.7231°N 0.9786°E ﻿ / 43.7231; 0.9786 I Cologne dia kaominina ao aminny fivondronani Auch, ao aminny departemantani Gers, ao aminny faritri Midi-Pyrénées, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 32106. I Max Laborie no benny tanàna ...
43.9583°N 0.3736°E ﻿ / 43.9583; 0.3736 I Condom dia kaominina ao aminny fivondronani Condom, ao aminny departemantani Gers, ao aminny faritri Midi-Pyrénées, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 32107. I Bernard Gallard no benny ta ...
43.6572°N 0.1789°W ﻿ / 43.6572; -0.1789 I Corneillan dia kaominina ao aminny fivondronani Mirande, ao aminny departemantani Gers, ao aminny faritri Midi-Pyrénées, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 32108. I Olivier Tinnarage no ...
43.6422°N 0.0933°E ﻿ / 43.6422; 0.0933 I Couloumé-Mondebat dia kaominina ao aminny fivondronani Mirande, ao aminny departemantani Gers, ao aminny faritri Midi-Pyrénées, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 32109. I Jacqueline Bezi ...
43.85°N 0.2436°E ﻿ / 43.85; 0.2436 I Courrensan dia kaominina ao aminny fivondronani Condom, ao aminny departemantani Gers, ao aminny faritri Midi-Pyrénées, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 32110. I Honorine Burgan no benny ta ...
43.5758°N 0.1575°E ﻿ / 43.5758; 0.1575 I Courties dia kaominina ao aminny fivondronani Mirande, ao aminny departemantani Gers, ao aminny faritri Midi-Pyrénées, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 32111. I Marc Senmartin no benny ...
43.7244°N 0.7308°E ﻿ / 43.7244; 0.7308 I Crastes dia kaominina ao aminny fivondronani Auch, ao aminny departemantani Gers, ao aminny faritri Midi-Pyrénées, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 32112. I André Gissot no benny tanàna ...
43.7667°N 0.0367°E ﻿ / 43.7667; 0.0367 I Cravencères dia kaominina ao aminny fivondronani Condom, ao aminny departemantani Gers, ao aminny faritri Midi-Pyrénées, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 32113. I Jacqueline Darbeau no ...
43.3525°N 0.4544°E ﻿ / 43.3525; 0.4544 I Cuélas dia kaominina ao aminny fivondronani Mirande, ao aminny departemantani Gers, ao aminny faritri Midi-Pyrénées, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 32114. I Christian Duprat no benny ...
43.8181°N 0.6883°E ﻿ / 43.8181; 0.6883 I Céran dia kaominina ao aminny fivondronani Condom, ao aminny departemantani Gers, ao aminny faritri Midi-Pyrénées, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 32101. I François Bouchard no benny t ...
43.8133°N 0.5003°E ﻿ / 43.8133; 0.5003 I Cézan dia kaominina ao aminny fivondronani Condom, ao aminny departemantani Gers, ao aminny faritri Midi-Pyrénées, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 32102. I Amédée Cintas no benny tanàn ...
43.345°N 0.4142°E ﻿ / 43.345; 0.4142 I Duffort dia kaominina ao aminny fivondronani Mirande, ao aminny departemantani Gers, ao aminny faritri Midi-Pyrénées, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 32116. I Gérard Fauque no benny tanà ...
43.5397°N 0.5789°E ﻿ / 43.5397; 0.5789 I Durban dia kaominina ao aminny fivondronani Auch, ao aminny departemantani Gers, ao aminny faritri Midi-Pyrénées, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 32118. I Alain Ribolléda no benny tanà ...
43.7664°N 0.1672°E ﻿ / 43.7664; 0.1672 I Dému dia kaominina ao aminny fivondronani Condom, ao aminny departemantani Gers, ao aminny faritri Midi-Pyrénées, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 32115. I Danièle Barthélemy no benny t ...
43.7°N 1.04°E ﻿ / 43.7; 1.04 I Encausse dia kaominina ao aminny fivondronani Auch, ao aminny departemantani Gers, ao aminny faritri Midi-Pyrénées, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 32120. I Jacques Pedrico no benny tanàna mandr ...
43.4233°N 0.5589°E ﻿ / 43.4233; 0.5589 I Esclassan-Labastide dia kaominina ao aminny fivondronani Mirande, ao aminny departemantani Gers, ao aminny faritri Midi-Pyrénées, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 32122. I Robert Loubet ...
43.6558°N 0.9125°E ﻿ / 43.6558; 0.9125 I Escornebœuf dia kaominina ao aminny fivondronani Auch, ao aminny departemantani Gers, ao aminny faritri Midi-Pyrénées, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 32123. I Sergine Ageorges no benn ...
43.4211°N 0.8644°E ﻿ / 43.4211; 0.8644 I Espaon dia kaominina ao aminny fivondronani Auch, ao aminny departemantani Gers, ao aminny faritri Midi-Pyrénées, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 32124. I Michel Traverse no benny tanà ...
43.7819°N 0.0714°E ﻿ / 43.7819; 0.0714 I Espas dia kaominina ao aminny fivondronani Condom, ao aminny departemantani Gers, ao aminny faritri Midi-Pyrénées, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 32125. I Pierre Cazères no benny tanà ...
43.8675°N 0.1075°W ﻿ / 43.8675; -0.1075 I Estang dia kaominina ao aminny fivondronani Condom, ao aminny departemantani Gers, ao aminny faritri Midi-Pyrénées, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 32127. I Jacques Cohen no benny tan ...
43.5506°N 0.3808°E ﻿ / 43.5506; 0.3808 I Estipouy dia kaominina ao aminny fivondronani Mirande, ao aminny departemantani Gers, ao aminny faritri Midi-Pyrénées, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 32128. I Antoine Mendez no benny ...
43.8369°N 0.8494°E ﻿ / 43.8369; 0.8494 I Estramiac dia kaominina ao aminny fivondronani Condom, ao aminny departemantani Gers, ao aminny faritri Midi-Pyrénées, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 32129. I Nicolas Goulard no benny ...
43.5069°N 0.6947°E ﻿ / 43.5069; 0.6947 I Faget-Abbatial dia kaominina ao aminny fivondronani Auch, ao aminny departemantani Gers, ao aminny faritri Midi-Pyrénées, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 32130. I Henri Chavarot no ben ...
44.0181°N 0.7936°E ﻿ / 44.0181; 0.7936 I Flamarens dia kaominina ao aminny fivondronani Condom, ao aminny departemantani Gers, ao aminny faritri Midi-Pyrénées, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 32131. I Xavier Ballenghien no be ...
43.5897°N 0.955°E ﻿ / 43.5897; 0.955 I Frégouville dia kaominina ao aminny fivondronani Auch, ao aminny departemantani Gers, ao aminny faritri Midi-Pyrénées, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 32134. I Jean Claude Darolles no be ...
43.6872°N 0.0039°E ﻿ / 43.6872; 0.0039 I Fustérouau dia kaominina ao aminny fivondronani Mirande, ao aminny departemantani Gers, ao aminny faritri Midi-Pyrénées, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 32135. I Jean-Pierre Musset no ...
43.6164°N 0.0156°E ﻿ / 43.6164; 0.0156 I Galiax dia kaominina ao aminny fivondronani Mirande, ao aminny departemantani Gers, ao aminny faritri Midi-Pyrénées, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 32136. I Jean Pagès no benny tanàna ...
43.4147°N 0.9142°E ﻿ / 43.4147; 0.9142 I Garravet dia kaominina ao aminny fivondronani Auch, ao aminny departemantani Gers, ao aminny faritri Midi-Pyrénées, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 32138. I Daniel Worzniack no benny t ...
43.8856°N 0.8469°E ﻿ / 43.8856; 0.8469 I Gaudonville dia kaominina ao aminny fivondronani Condom, ao aminny departemantani Gers, ao aminny faritri Midi-Pyrénées, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 32139. I Jacques Soulan no benn ...
43.4803°N 0.8342°E ﻿ / 43.4803; 0.8342 I Gaujac dia kaominina ao aminny fivondronani Auch, ao aminny departemantani Gers, ao aminny faritri Midi-Pyrénées, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 32140. I Lucien Beyria no benny tanàna ...
43.4092°N 0.7233°E ﻿ / 43.4092; 0.7233 I Gaujan dia kaominina ao aminny fivondronani Auch, ao aminny departemantani Gers, ao aminny faritri Midi-Pyrénées, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 32141. I Pierre Mallet no benny tanàna ...
43.7725°N 0.6531°E ﻿ / 43.7725; 0.6531 I Gavarret-sur-Aulouste dia kaominina ao aminny fivondronani Condom, ao aminny departemantani Gers, ao aminny faritri Midi-Pyrénées, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 32142. I Éric Biz no ...
44.0086°N 0.4514°E ﻿ / 44.0086; 0.4514 I Gazaupouy dia kaominina ao aminny fivondronani Condom, ao aminny departemantani Gers, ao aminny faritri Midi-Pyrénées, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 32143. I Guy Saint-Mézard no benn ...
43.6089°N 0.1925°E ﻿ / 43.6089; 0.1925 I Gazax-et-Baccarisse dia kaominina ao aminny fivondronani Mirande, ao aminny departemantani Gers, ao aminny faritri Midi-Pyrénées, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 32144. I Roland Sordes ...
44.0408°N 0.7194°E ﻿ / 44.0408; 0.7194 I Gimbrède dia kaominina ao aminny fivondronani Condom, ao aminny departemantani Gers, ao aminny faritri Midi-Pyrénées, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 32146. I Alain Dumeaux no benny ta ...
43.8058°N 0.735°E ﻿ / 43.8058; 0.735 I Goutz dia kaominina ao aminny fivondronani Condom, ao aminny departemantani Gers, ao aminny faritri Midi-Pyrénées, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 32150. I Eric Laborde no benny tanàna m ...
43.6186°N 0.0208°W ﻿ / 43.6186; -0.0208 I Goux dia kaominina ao aminny fivondronani Mirande, ao aminny departemantani Gers, ao aminny faritri Midi-Pyrénées, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 32151. I Patricia Lamarque no benny ...
43.6739°N 0.1811°W ﻿ / 43.6739; -0.1811 I Gée-Rivière dia kaominina ao aminny fivondronani Mirande, ao aminny departemantani Gers, ao aminny faritri Midi-Pyrénées, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 32145. I André Bacquié no ben ...
43.4203°N 0.1628°E ﻿ / 43.4203; 0.1628 I Haget dia kaominina ao aminny fivondronani Mirande, ao aminny departemantani Gers, ao aminny faritri Midi-Pyrénées, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 32152. I Gérard Pedurthe no benny ta ...
43.5583°N 0.6675°E ﻿ / 43.5583; 0.6675 I Haulies dia kaominina ao aminny fivondronani Auch, ao aminny departemantani Gers, ao aminny faritri Midi-Pyrénées, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 32153. I Alain Broseta no benny tanàn ...
43.8103°N 0.8511°E ﻿ / 43.8103; 0.8511 I Homps dia kaominina ao aminny fivondronani Condom, ao aminny departemantani Gers, ao aminny faritri Midi-Pyrénées, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 32154. I Alain Claoue no benny tanàna ...
43.5253°N 0.4583°E ﻿ / 43.5253; 0.4583 I Idrac-Respaillès dia kaominina ao aminny fivondronani Mirande, ao aminny departemantani Gers, ao aminny faritri Midi-Pyrénées, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 32156. I Nicole Laberenne ...